မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): ကွန်ပျုတာကို ပေါ့ပါးသွက်လက်အောင် ရှင်းပေးတဲ့ Pc Cleaner-2013
ကွန်ပျုတာကို ပေါ့ပါးသွက်လက်အောင် ရှင်းပေးတဲ့ Pc Cleaner-2013
ဒီဆော့ဝဲလေးက ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးမို့သာမာန်ကွန်ပျုတာတွေအတွက် ကောင်း၏
Miscrosoft ကထုတ်တဲ့ MSE ဟာ Window xp,Window 7,Window-8 အတွက်
အလွန်သင့်တော်ပါတယ် ။ သူကထုတ်တဲ့ဝင်းဒိုးတွေမလို့ သူကထပ်ထုတ်တဲ့ဆော့ဝဲ
နည်းပညာတွေဟာ တွက်ဘက်ညီသဟဇာတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပမာဏသေးပီးတော့
အသုံးဝင် အလုပ်လုပ်မှု များတယ်။ ဒီဆော့ဝဲကလည်း သေးသေးနဲ့ရှင်းလင်းမှုတွေ
Error တွေကို Fix လုပ်ပေးမယ့် နည်းပညာတွေ အတော်လေးကောင်းလာပါတယ်
ဒီဆော့ဝဲရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံတွေက ကွန်ပျုတာကို မြန်ဆန်သွက်လက်စေပါလိမ့်မယ်
Miscrosoft Partner က ထုတ်တဲ့ ဆော့ဝဲကောင်းလေးတစ်ခုပါ ။
All-in-One PC Cleaner ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်
Ziddu ဆိုဒ်က တင်တာမို့Dwonload ယူနည်းအရင်ကြည့်လိုက်ပါ
Download ကို နှိပ်ပါ . အောက်ကရေးပြနေတဲ့ စာနဲ့ ကပ်လျှက်ပါ
Uploaded Date : 2013-04-17
တခြား စားလုံးအကြီး ရောင်စုံနဲ့Download ဆိုတွေမနှိပ်ပါစေနဲ့ 
ပီးရင် Verification Code မှန်အောင်ဖြည့်လိုက်ပါ လင့်တွေပွင့်လာပိတ်ပါ
စာဖြည့်ပီးရင် အောက်နားက အမှန်ချစ်ဖြုတ် ( Download with ziddu စာနဲ့ )
Download -www.ziddu.com/Pc cleaner pro 2013 with key
အပေါ်ကမရခဲ့ရင် မူရင်းဆိုဒ်မှာယူ - www.rafaysoft.blogspot.com.
Labels: Computer Cleaner ဆော့ဝဲများ, Computerလေးနေတာကိုမြန်ချင်ရင်
Phone မှာ ချိတ်ထားတဲ့ သူများ Wifi ပတ်စ၀ပ်တွေကို ပြန်ကြည့်ချင်ရင် ဒီနည်းသုံးလိုက်
ဖုန်းထဲမှာ Wifi ချိတ်ထားတဲ့အခါ ပတ်စ၀ပ်ပြန်ကြည့်ချင်တဲ့သူ ဒီနည်းသုံး တခါတလေမှာ ကြုံတတ်ပါတယ် ။ အလုပ်က Wifi ကို ကိုယ့်ဖုန်းထဲချိတ် ပတ်...
ဖုန်းထဲမှာ အခြေခံမှစ၍ လေ့လာလိုသူများအတွက် ပါဠိ၊ မြန်မာ အဘိဓမ္မာ
ဤ Application သည် အဘိဓမ္မာကို အခြေခံမှစ၍ လေ့လာလိုသူများအတွက် နားလည်လွယ်သော ပါဠိ၊ မြန်မာ အဓိပ္ပါယ်ဖြင့် ရှင်းလင်း ရေးသား ထားပါသည်။ သွားလ...